रूपान्तरण हुन नचाहनेको मृत्यु हुन्छ : अनिल शर्मा ‘विरही’ | Thenextfront
रूपान्तरण हुन नचाहनेको मृत्यु हुन्छ : अनिल शर्मा ‘विरही’
(अनिल शर्मा ‘विरही’ एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ । कवि तथा निबन्धकारका रूपमा समेत चर्चित ‘विरही’ मार्क्सवाद–लेनिनवाद र माओवादप्रति प्रतिबद्ध क्रान्तिकारी युवा नेताका रूपमा राजनीतिक क्षेत्रमा स्थापित हुनुहुन्छ । केही महिनाअघि मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी स्वास्थोपचारका लागि उहाँ लामो समयसम्म अस्पतालमा रहनुभएको थियो । माओवादी पार्टीको हालै बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले गरेका निर्णयहरूको सेरोफेरोमा रहेर हाम्रा सहयोगी, नौलो विहानी पत्रिकाका सप्पादक तथा युवा साहित्यिक प्रतिभा अशोक सुवेदीले उहाँसित गरेको सङ्क्षिप्त कुराकानीलाई हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ । )
प्रश्न : केन्द्रीय समितिको बैठक कत्तिको उपलब्धिपूर्ण रह्यो ?
उत्तरः अहिलेको केन्द्रीय समितिको बैठकलाई दुई कोणबाट उपलब्धिपूर्ण देखन सकिन्छ; पहिलो, सबैखाले अवसरबादको मुख्यालय ध्वस्त नगरेसम्म क्रान्तिकारी आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्दैन । दक्षिणपन्थी सुधारवाद, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद, मध्यपन्थी अवसरवाद र नोकरसाही एकमनावाद यो बैठकमा नराम्ररी नाङ्गियो र कमजोर भयो, यसले जनतामा आशावाद जन्मायो र नयाँ शक्ति उदयको सपना उमार्यो । दोश्रो, क्रान्तिको मुख्य बाधक प्रवृत्तिका विरुद्ध सबैखाले ढुलुमुल शक्ति र प्रवृत्तिहरूलाई क्रान्तिकारी प्रवृत्तिले आफ्नो वरिपरि गोलबन्द गरी नेतृत्व प्रदान गर्यो । क्रान्तिका लागि क्रान्तिकारी वैकल्पिक शक्ति मूल प्रवृत्तिका रूपमा स्थापित भयो । साथसाथै अर्कोतिर यसले संसदीय गोलचक्करवादको खतरा पनि बढाएको छ । यो अहिलेको चुनौती हो ।
प्रश्न : प्रचण्डका विरुद्ध क्रान्तिकारी समूह र दक्षिणपन्थी समूहका बीचमा अपवित्र गठबन्धन भयो भन्ने चर्चा पनि छ नि ?
उत्तरः प्रचण्ड पक्षधरहरूले पार्टीका कुनै पनि पात्र र प्रवृत्तिसँग एकता गर्दा त्यो पवित्र र क्रान्तिकारी हुने, त्यही कार्य अरूहरूले गर्दा अपवित्र हुने भन्ने कुरा घोर अवसरवादी र हास्यास्पद छ । हाम्रो पार्टीका कुनै पनि नेता कसैका ‘घरवाली’ होइनन्, जो कसैको आँगनमा सिन्दुर–चुरा पहिरेर आएका होऊन् । अर्कोतिर पार्टीको नयाँ ध्रुवीकरण कसैको विरुद्धमा होइन, दक्षिणपन्थी अवसरवाद–राष्ट्रिय आत्मसमर्पणकारी मुख्यालयका विरुद्ध हो । यो अध्यक्ष प्रचण्डसहित समग्र पार्टीको रूपान्तरणका लागि जबरजस्त धक्का हो । आफुलाई रूपान्तरण गरेर पार्टीलाई विघटन हुनबाट बचाउन तयार नहुने विघटनकारी, फूटवादी, अवसरवादीहरुको छट्टू स्यालको हुइयाँ हो यस किसिमको भनाइ । आन्दोलनले हामी सबैको रूपान्तरणको माग गरिरहेको छ, जो रूपान्तरण हुन तयार हुँदैन, त्यसको मृत्यु हुन्छ ।
प्रश्न : धोबीघाट गठबन्धनले कमरेड प्रचण्डमा देखिएको एकाधिकारवादी, हैकमवादी, निरङ्कुश प्रवृत्ति, आचरण र व्यवहारलाई रूपान्तरित गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्ला त ?
उत्तरः यस अघिको स्थायी समितिको बैठकले मन्त्रीमण्डलमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व नभएको र त्यसलाई सच्याउनु पर्ने निर्णय गरेको थियो । तर पार्टीनिर्णय लागू गरिएन । सेना समायोजनका केन्द्रीय समितिको निर्णय उल्लङ्घन गरिएको थियो । त्यसलाई सच्याउने र लागू गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । सामूहिक नेतृत्वप्रणाली लागू गर्नका लागि बहुपक्षीय प्रणाली सुरु गरिएको थियो । कार्यविभाजन भने त्यसअनुसार थिएन । क्रान्तिको भाग्य र भविष्य एक व्यक्तिको सनकको खेलजस्तो थियो । त्यसलाई सच्याउने निर्णय भएको छ । बैठकले पार्टीनिर्णय लागू गर्न मूल नेतृत्वसहित सबैमा दवाब सिर्जना गरेको छ । हामी फूट र विसर्जन होइन, रूपान्तरणप्रति आशावादी छौं । आन्दोलनका लागि व्यक्तिको बलिदान अहिले अनिवार्य शर्त हो ।
प्रश्न : प्रचण्डमा देखिएका विचलनका मूलभूत प्रवृत्तिहरूलाई कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ ?
उत्तरः वैचारिक रूपमा दक्षिणपन्थी सुधारवाद मुख्य समस्या हो, जसले क्रान्तिकारी नाराभित्रबाट सुधारवादी कार्यदिशा लागू गर्न चाहन्छ । राजनीतिक रूपमा राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी समस्या छ । जनयुद्धको मुख्य आयाम राष्ट्रिय स्वाधीनता थियो । त्यसका लागि नयाँ सेना निर्माण गर्नु प्राथमिक कार्य हो । तर सुरक्षा नीति नै नबनाई सेना समायोजन गर्ने, हतियार बुझाउने, जनसेना विघटन गर्ने र भारत नियन्त्रित सुरक्षासंयन्त्रलाई बलियो बनाउने षडयन्त्र भैरहेको छ । राजकीय शक्ति जनतामा जान नदिने षडयन्त्र भैरहेको छ । यी सबै हर्कतहरू भारतीय विस्तारवादको दवाब र योजनामा भैरहेका छन् । माथिल्लो कर्णाली भारतलाई सुम्पने, त्यसका विरुद्धमा उठेको आवाज दबाउने, अनिवार्य सेवाको सुनिश्चितताको नाममा जनअधिकार कटौती गर्ने कार्यहरू भैरहेका छन् । यसरी राजनीतिक रूपमा राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद देखापर्दछ । कार्यशैलीमा नोकरसाही एकमनावाद छ, जसका कारण आफूबिना धरती हल्लन्न भन्ने ठान्दछ । ब्रम्हाजीको काँधमा पृथ्वी अडेको छ र उसको इच्छामा मात्र पृथ्वी हल्लिन्छ भन्ठान्छ । यो चिन्तनले ‘इतिहासका निर्माता जनता हुन्’ भन्ने द्वन्द्ववादी मान्यतालाई अस्वीकार गर्दछ । वैचारिक, राजनीतिक र विधिमा यी मुख्य समस्याहरू देखापरेका छन् ।
प्रश्न : तपाईंहरू आफैँले दक्षिणपन्थी सुधारवादमा विचलन भैसकेको ठहर गरेको डा. बाबुराम भट्टराई समूह र कमरेड प्रचण्डकै रक्षाकवजको भूमिका खेलेको प्रकाश समूहसँग कसरी यो समझदारी संभव भयो ? यो समझदारीको भविष्य लामो हुनसक्ला र ?
उत्तरः राजनीतिक र वैचारिक रूपमा हाम्रा बीचमा मतभेदहरू यथावत छन् । त्यसो हुँदाहुँदै पनि केही विषयहरूमा समान सोचाइहरू देखापरे । राजकीय निकायहरूमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने प्रश्नमा समानता देखियो । शासकहरू राजकीय शक्ति सिंहदरवारमा राखने र दिल्लीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने पक्षमा छन् । हामी सङ्घीयतामार्फत सिंहदरवारमा निहित शक्ति जनतासम्म पुर्याउन चाहन्छौँ। राजकीय शक्तिमा समानुपातिक र समावेशी नगर्नु भनेको सङ्घीयताबाट पछाडि हट्ने दिल्ली दरवारको दवाब र निर्देशनको परिणाम पनि हो । त्यसैले यो मुद्दा गम्भीर राजनीतिक मुद्दा हो । जनयुद्धको प्रक्रियाबाट आएको मूल पङ्क्ति र जनआन्दोलनको प्रक्रियाबाट आएको एउटा पङ्क्तिका बीचमा यस विषयमा समान धारणा बन्यो । त्यसैगरी नेतृत्वमा देखापरेको नोकरसाही एकमनावादका विरुद्ध सामूहिक नेतृत्वप्रणालीको विकास गर्ने प्रश्नमा पनि समान धारणाहरू बने । यी विषयहरू लामो समयदेखि बहसमा थिए । त्यसले मात्रात्मक विकास गर्दै थियो । धोबीघाट भेलासम्म पुग्दा त्यसले गुणात्मक आकार ग्रहण गर्यो । क्रमभङ्ग भएपछि कुम्भकर्णका निद्रा खुल्न गए । पार्टीभित्र र बाहिरका शासकहरूको स्वर्गमा भुकम्प गयो र उनीहरू बर्बराउन थाले । जहाँसम्म ‘गठबन्धन’ कहिलेसम्म ? भन्ने प्रश्न छ– एउटै पार्टीभित्र रहेपछि स्थायी गुटहरू अथवा ‘गठबन्धनहरू’ हुनु हुँदैन । जब स्थायी गुटहरू र ‘गठबन्धनहरू’ हुँदैनन् र विषयगत रूपमा ठीक र बेठीकका बीचमा ध्रुवीकरण हुन्छ, त्यो प्रक्रियाले ‘अन्तर्विरोधहरूलाई सत्यको अन्वेषणका लागि प्रेरित गर्दछन्’ । धोबीघाट ‘गठबन्धन’ का आधारहरू रहुन्जेल यो ‘गठबन्धन’ रहिरहन्छ । जब नयाँ अन्तर्विरोधहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, तब नयाँ ध्रुवीकरण अनिवार्य बन्दछ । मैले बुझेको मार्क्सवाद यही हो । द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद यही हो ।
प्रश्न : अहिलेको अन्तर्विरोधसित जोडेर किरणपक्षलाई पदलोलुप, कुण्ठा पालेकाहरू, अधैर्यतावादीहरू जस्ता आरोपहरू पनि लगाइएको देखिन्छ । यसका साथै किरण पक्षलाई परम्परावादी, रुढिवादी, सङ्कीर्णवादीजस्ता आरोपहरू पनि लगाइने गरिएको पाइन्छ नि ?
उत्तरः क्रान्तिकारीहरू भनेका युद्धको समयमा बन्दुक पड्काउने र शान्तिकालमा घण्टमात्रै बजाएर बस्ने जमात होइन । वृन्दावनमा रामनाम जपेर बस्दैमा क्रान्तिकारी प्रवृत्ति हाबि हुँदैन, यसका लागि शक्तिका सबै केन्द्रहरूमा क्रान्तिकारीहरूको प्रभाव हुनु आवश्यक छ । हामीले रणनीतिमा अस्थायी युद्धविराम गरेर कार्यनीतिमा भीषण हमला गरेका छौँ । क्रान्तिकारीहरूमा रणनीतिमा रमाउने तर कार्यनीतिलाई बेवास्ता गर्ने त्रुटिपूर्ण आदत पनि बसेको छ । रणनीति र कार्यनीतिलाई एकसाथ हिंडाउन नसक्दा क्रान्तिकारी प्रवृत्ति हाबि हुन सकिरहेको छैन । अहिलेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा हामी कार्यनीतिक प्रश्नमा केन्द्रित भएका कारण केही भ्रमहरू उत्पन्न भएका छन् । अवसरवादीहरु रणनीतिक प्रश्नमा सम्झौता गर्छन्, तर कार्यनीतिक प्रश्नमा सम्झौता गर्दैनन्, किनकि रणनीति उधारो व्यापार हो भने कार्यनीति नगद व्यापार हो । इमान्दार अथवा क्रान्तिकारी शक्तिसँग उधारो व्यापार गर्न सकिन्छ, तर बेइमान अथवा अवसरवादसँग नगद व्यापार गर्नुपर्छ । अवसरवादलाई फुटाउन र पराजित गर्न अवसरवादी औजार नै आवश्यक पर्दछ । आफूलाई त्यागी र दानी ठान्ने महाराजाहरूले अमूक पद छोड्नुपर्छ भने पार्टी नै फुटाउने धम्की दिनुको सट्टा त्याग गरेर काशीतिर जान किन नसकेका होलान् ! यो पनि यसैसँग जोडिएको प्रश्न हो । अर्कोतिर संसारभरिका दक्षिणपन्थीहरू र सुधारवादीहरूले क्रान्तिकारीहरूलाई परम्परावादी, रुढिवादी, जडसुत्रवादी आरोप लगाउँदै आएका छन् । यस अर्थमा संसारभरिका क्रान्तिकारीहरूले हतास हुने होइन, गर्व गर्नुपर्छ र तेङ मण्डलीहरूलाई सदैव दुत्कारिरहनुपर्छ ।
प्रश्न : सरकार पुनर्गठनसँगै विचारसङ्घर्षको मुद्दा ओझेलमा पर्ने त होइन ?
उत्तरः वर्गसङ्घर्षको अभिव्यक्ति पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्षका रूपमा अभिव्यक्त हुन्छ । वर्गसङ्घर्ष पेचिलो भएका कारण हाम्रो पार्टीको अन्तरसङ्घर्ष पनि पेचिलो बनेको छ । राजनीतिमा परस्पर विरोधी वर्गहरू एकले अर्कोलाई निल्न चाहन्छन् । त्यो कुरा भौतिक जगतको विकास र आत्मगत अवस्था समेतको योगबाट स्वतन्त्र ढङ्गले घटित हुन्छ । शक्तिसन्तुलनको स्थितिमा राजनीतिमा सम्झौता हुन्छ । अहिले सम्झौता गर्ने सहमति भएको छ । सहमति लागू गर्ने इमान्दारीले रूपान्तरणका लागि मार्गप्रसस्त गर्दछ । वर्गसङ्घर्षले पैदा गरेका चुनौतीहरूको फैसला नहुञ्जेल पार्टीभित्रको विचारसङ्घर्ष ओझेलमा पर्दैन भन्नेमा हामी सबैलाई आश्वास्त पार्न चाहन्छौं।
प्रश्न : तपाईंहरूले बोकेको जनविद्रोहको कार्यदिशा वर्तमान वस्तुगत यथार्थतासँग मेल खाँदैन र यो संभव पनि छैन भन्नेहरूको पनि कमी छैन नि ?
उत्तरः जनविद्रोहको कार्यदिशा किरण पक्षको मात्र नभएर पालुङटार विस्तारित बैठकबाट पारित कार्यदिशा हो । त्यसको विरुद्धमा जानेहरू गैरक्रान्तिकारी, दक्षिणपन्थी मात्र होइन, पार्टीपद्धति विरोधी, पार्टीनिर्यण विरोधी पनि हुन्, जसले बलप्रयोगबिना नै राज्यसत्ताको आधारभूत चरित्र बदल्न सकिन्छ भन्ने मार्क्सवादको आधारभूत प्रश्नकै विरोध गरिरहेका छन् । वस्तुगत यथार्थता र व्यवहारिकता भनेको दुस्मनका सामु लम्पसार हुनु हो ? जहाँसम्म जनविद्रोह तत्कालको कार्यनीतिक प्रश्न हो कि राजनीतिक ? भन्ने प्रश्न छ, त्यसमा बहस गर्न सकिन्छ । जनविद्रोह अनिवार्य ठानिसकेपछि तत्काल सम्भव छैन भने पनि तयारीमा लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । दिल्ली दरवारको निर्देशनमा के.पी.–सुशिलपथमा विचरण गरेर लेनिनपथमा पुगिन्न भन्ने हाम्रो भनाइ हो । हिजो प्रचण्डलाई पोलपोट भन्नेहरू, कम्युनिस्ट आन्दोलनका भगौडाहरू र वाईसीयललाई अपराधी झुण्ड भन्ने गिरीजाहरूलाई आदर्श बनाएर तिनैको वैसाखी टेकेर वैतरणी तर्ने सपना कसैको हो भने, उसको दुखद अन्त्य हुनेछ । यो जनताप्रति, आफ्नो पङ्क्तिप्रति र जनयुद्धको आदर्शप्रतिको विचलनको अभिव्यक्ति पनि हो ।
« ‘Should not our chairman speak on this?’
मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद: सर्वहारावाद वा बुद्धिविलाश ! »
6 Responses to “रूपान्तरण हुन नचाहनेको मृत्यु हुन्छ : अनिल शर्मा ‘विरही’”
काम. अनिल को विचार ठिक छन् . अब कार्यविभाजन मा क्रान्तिकारी प्रवृतिलाई हाबी गराएर पलुनग्टरको कार्यदिशा मा अघि बढ्नु को विकल्प छैन . सबैखाले गलत प्रवृति को भण्डाफोर गर्दै क्रान्तिकारी रुपान्तरणको पहल गर्नु पर्छ .
Anil Comrade Kura ta thikai garnu bhayo. Tara katai tapainharoo pani birodhako rajniti garne, bargaiing garne ra shakti sadhan ra subidha khoji rahanu bhayeko ta chhaina bhanne prabhv janatama parna thaleko chha. Aahileko santhganthale ta yesai bhanchha. aakhir tapaiharoo pani uhi golchhakkarma . kura krantika kam khanpinka. Haa! Haa! Haa!
i 100% agree with you…..comred Anil sharma
Bhawani Baral says:
Anil jee ko jichar thik cha.
himal Joshi says:
Anilji ko bicharsanga ma sahamat chhu.
TN Rijal.(Toya Nath Rijal.) says:
Anil ji, hat off. Ramro lagyo.